» एकदमै कडा भिडियो! नाच्दै नाच्दै बिदा भाइन बेहुली ,मेरो पनि खिरपुरिवालिको जस्तै टिकटक बनाइदिनु भनिन…हेर्नुहोस भिडियो.. एकदमै कडा भिडियो! नाच्दै नाच्दै बिदा भाइन बेहुली ,मेरो पनि खिरपुरिवालिको जस्तै टिकटक बनाइदिनु भनिन…हेर्नुहोस भिडियो.. – हाम्रो खबर
एकदमै कडा भिडियो! नाच्दै नाच्दै बिदा भाइन बेहुली ,मेरो पनि खिरपुरिवालिको जस्तै टिकटक बनाइदिनु भनिन…हेर्नुहोस भिडियो..
2020, December 12th, Saturday
admin 1546 Views
काठमाडौ । अहिले सामाजिक संजालमा धेरै भिडियोहरु भाइरल भइरहेका छन अझ यो झन त मंसिरको महिना त्यस्मा पनि विवाहका भिडियोहरु त अति नै भाइरल भइरहेका छ्न । यहि मंसिर महिनामा देशमा ख्यातिप्राप्त कलाकार तथा प्रसिद्ध ब्यक्तित्वहरुले पनि धुमधाम संग विवाह गरे ।
यसैक्रममा प्रखर वक्ता रमेश प्रसाईं र समाजसेवी नन्दा सिंह संग विवाह गरे । त्यस्तै नायिका श्वेता खड्काको पनि विवाह भयो । श्वेताले धनगढीका बिजेन्द्र राउत संग विवाह गरेकी हुन । उनीहरूको विवाह पछिल्लो समय निकै नै चर्चामा बनेको थियो र अहिले पनि बनिरहेको छ ।
त्यस्तै अहिले पछिल्लो समयमा टिकटकमा पनि धेरै भिडियोहरु भाइरल भइरहेका छन । यो मंसिर महिनाभरी विवाहका भिडियोहरुले सामाजिक संजाल भरी रंगिएका छन।
त्यस्तै टिकटकमा एउटि पस्चिमी समुदायकि महिलाले विवाहमा खिर पुरि खाने भन्ने टिकटिक निकै नै भाइरल बन्यो ।त्यस्तै अहिले यो भिडियो पनि निकै नै भाइरल बनिरहेको छ । उक्त भिडियो २४ घण्टामै १० लाख भन्दा बढी हेरिएको थियो ।
उक्त भाइरल भिडियो हेर्नुहोस..
“मन्त्री झाँक्रीलाई ‘भाउजु’ भन्दै मन्त्रालय, चलाउने श’क्तिशाली, सुब्बासाप ! १० वर्षदेखि मन्त्रालयमै रजगज…
“जब एमाले अध्यक्ष, ओलीलाई न्यूरोडको, एक पसलमा गितार,किन्दै गरेको भेटियो !”
“कुलमान घिसिङको, अर्को कमाल, देशैभरका,डेरावालाले गरे प्रशंसा !”
“सिंगो राजनिती तरंगित, हुने गरि प्रचण्डले, राखे नयाँ प्रस्ताव !”
“जब सिटामोल लगायतका औषधीको अभाव, भएको सुनेपछि प्रधानमन्त्री देउवा को, आयो यस्तो, निर्देशन”
“एसीसीएको परीक्षामा, नेपाली विद्यार्थी, रिया मानन्धर विश्वकै उत्कृष्ट”
“पहिचानसहितको, मधेश प्रदेश र राजधानी, जनकपुर बनाउनु सफलताः प्रचण्ड”
“नेपालमा कोरोना, भाइरस, फैलनुको मुख्य कारक सरकार र मुख्य, राजनीतिक दल, नै बने ।”
“चुनावमा पैसाको खोलो बग्न सक्ने, नेता देखि मन्त्री सम्म कमाउने ठाउँ खोज्न सहयोगि हरु खटाइदै,
“योगेश भट्टराईको! राजनीती पत्तासाफ”!
“कोरोना खोपमा, पनि गोलमाल, राज्यले किनेको २४ लाख, खोपको हिसाब छैन”
“एकदिन पनि टिक्न, पाएन माधब नेपालको, खुसि , प्रभावशाली नेताले, गरे एमालेमै, फर्किने, घोषणा”
“नेपालमा, आजसम्मकै, नयाँ रेकर्ड कायम, आज ११ हजार ५५२ जना, संक्रमित थपिए”
“टन्सिल भयाे भनेर, आउनुहुन्छ, तर पीसीआर परीक्षण गर्दा काेराेना देखिन्छ : डा. रक्षा गौतम”
“कांग्रेस महामन्त्री, शर्माको, सपरिवार कोरोना संक्रमित, सभामा सतर्कता, नअपनाएको भन्दै, आत्मालोचना”
( 2022, January 19th, Wednesday)